သန်းဝင်းလှိုင် - လင်းယုန်သစ်လွင် (ခရစ်နှစ် ၁၉၁၇ - ၁၉၉၃)
မြန်မာဇာတ်ပွဲတွင် ဇာတ်သမ အမျိုးသမီးပညာသည်ကို ဇာတ်မင်းသမီးဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဇာတ်မင်းသမီးလုပ်သူသည် အမျိုးသမီးပိုင်းဆိုင်ရာ ကကြိုးကကွက်များကို နိုင်နင်းစွာ တတ်ကျွမ်းရလေသည်။ ထို့အပြင် မင်းသမီးကောင်းတလက်ဖြစ်လိုလျှင် “ပိုး၊ မွေး၊ ခေါ်။ မျှော်၊ အောင်၊ ဇော်၊ လု၊ ဘ၊ ရူး၊ အ၊ သေ၊ ပစ်” ဟူသော မင်းသမီးတို့တတ်အပ်သော ဇာတ်သဘင်ပညာ ၁၂ ရပ်ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်ကျွမ်းရသည်ဟု နာမည်ကျော်ကြားရုပ်သေးမင်းသမီးကြီးဆရာပုက ဆိုသည်။
ဤနေရာ၌ ဇာတ်သဘင်ပညာ ၁၂ ရပ်ဆိုသည်မှာ –
(၁) ပိုး -ဟူရာ၌ မင်းသမီးပင်ဖြစ်လင့်ကစား အချို့ဇာတ်များတွင် “ကိန်းက ဇောက်ထိုးတယ်မှရှင်မိန်းမနောက်ပိုး” လုပ်ရတတ် သည်ဖြစ်သဖြင့် မိန်းမတန်မဲ့ ယောက်ျားကိုစ၍ ပိုးခန်း – ကြုံလာလျှင် သဘာဝကျကျ တကယ့်အဖြစ်အစစ်နှင့် တူအောင် ပိုးတတ်ရသည်။
(၃) ခေါ် -ဆိုသည်မှာ ဇာတ်ပွဲတို့၏ အစဉ်အလာအတိုင်း လင်ကို ခေါ်နည်း၊ သားကိုခေါ်နည်း၊ ကျေးကျွန်ကိုခေါ်နည်း၊ အရှင်သခင်ကို ခေါ်နည်း စသည်ဖြင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အညီ ခေါ်တတ်ပြောတတ်ဖို့ လိုသည်။ သာဓကအားဖြင့် လင်ကိုခေါ်ရာ၌ “သပြေရွက်စည်၊ မြရည်ရောင်ဖိတ်၊ တသောင်းထိပ်မှ၊ ဖြူရိပ်စကြာ၊ ဖြန့်မိုးကာရ၊ ဒီပါတိုင်းလုံးရှင်မောင်မောင်ဘုရား……” စသည့် အခေါ်မျိုးဖြင့် ခေါ်တတ်ရမည်ကို ဆိုလိုပါသည်။
(၉) ရူး – ဟူသည်မှာ ဇာတ်ကွက်နှင့်အညီ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ရူးသွပ်ရသည့်အခါ၌ တကယ့်အရူးနှင့်တူအောင် ရူးတတ်ဖို့ လိုသည်။ ဤလိုအခန်းမျိုးကို ရုပ်သေးမင်းသမီး ဆရာပု၊ မင်းသမီးမထွေးလေး၊ ထားဝယ်ပြန်ဒေါ်စိန်ခင်တို့သာလျှင် နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကနိုင်၍ အရူးခန်းပီပြင်သည်ဟု ကျော်ကြားလေသည်။ မထွေးလေး၏ ပဋာစာရီဇာတ်ကို ကပြရာ၌ အရူးခန်းကို ပရိသတ်က မေ့မရအောင် ဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုလေသည်။
သို့သော် မြခြေကျင်း မငွေမြိုင်သည် ဇာတ်မင်းသမီး အနှစ် ၃၀ ကျော် ကပြနေစဉ်အတွင်း ဇာတ်မင်းသားကြီး ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်နှင့် လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဖိုးစိန်နှင့်လည်းကောင်း၊ မင်းသားအောင်စည်ဗလနှင့်လည်းကောင်း၊ ရုပ်သေးမင်းသားဘလှိုင်နှင့်လည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏား ဖေဆိုင်၊ မြင်းခြံနယ်မှ ဘထွန်း၊ ကိုစိန်အုပ်တို့နှင့်လည်းကောင်း တွဲကခဲ့ဖူးသည်။ မငွေမြိုင်၏ ဇာတ်သဘင်သက်၌ အကျော်ကြားဆုံးအချိန်မှာ အသက် ၃၀ ခန့်အရွယ်ကောင်းတွင် မင်းသားဘလှိုင်နှင့်တွဲ၍ ရွာစားစိန်ဗေဒါ၏ ဆိုင်းနှင့်ကစဉ်က ဖြစ်လေသည်။ မငွေမြိုင်၏အသံမှာ ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အသံကောင်းလှသည်ဟု ပြောနိုင်သည့် ပထမတန်းစား အသံမျိုးမဟုတ်သော်လည်း သီချင်းဆိုသည့်အခါ၌ သံဟောက်သံဟဲကောင်း၍ အသံကြည်လင်ပြတ်သားသည်။ အာခေါင်အာရင်းရှင်းစွာ သီဆိုနိုင်သည့် မင်းသမီးဖြစ်၍ သီချင်းဆိုရာတွင် အထူးသဖြင့် ခြေဆင်းအဆိုကောင်းသောကြောင့် ခြေဆင်းကို ရှည်ရှည်စပ်၍ ပေးကြရသည်။ မငွေမြိုင်သည် အကကို မင်းသားအကရော မင်းသမီးအကပါ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကတတ်သည်။ ကသည့်အခါ ခြေဆစ်လက်ဆစ် အလွန်ကျိုးသူဖြစ်သည်။ မငွေမြိုင်သီဆိုခဲ့သည့် သီချင်းများမှာ စစ်ကိုင်းဆရာကြည်ရေး “လေးလက်မဓာတ်ပုံ”၊ စစ်ကိုင်းဆရာကြည်ရေး “ဆောင်တော်ကူး”၊ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရေး “မြိုင်”၊ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရေး “ရွှေကျီးညို”၊ ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်ရေး “အာကသဇိုး” တို့သည် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။
“မုဆိုးမမို့…. စိတ်ကျလိမ့်မယ် ထင်သလား၊ ရှေ့နှစ်ခါမှ…. ဆပ်ကော်မတီယူပြ မအေကျုပ်က အိမ်ရှေ့က ကျောက်လမ်း… ယခုပြင်စေ… အများမဲဆန္ဒကိုရမယ့် မိန်းမဆပ်ကော်မတီပေ… လမ်းကောင်းရစေ မအေ… စခန်းကောင်းရစေ မအေ… အနောက်နိုင်ငံများက သတင်းစာဖတ်ကြည့်ပါ… မိန်းမ ဟုမ်းမင်ဘား၊ မိန်းမငါးထောင်စားလို့ မကြားဘူးသူတွေ…… ရီတာပေါ့အေ…. မေရီပစ်ဖို့ဒ်ဆိုတာ… သဘင်သည်မပေါ့အေ….” ဟူသော သူဆိုသီချင်းကိုကြည့်လျှင်လည်း မည်မျှတိုးတက်ခေတ်မီ၍ မည်မျှပင် အမျိုးသမီးထုအပေါ်၌ စေတနာကြီးမားသည်ကို သိနိုင်လေသည်။
အကကောင်း၍လားမသိ။ မငွေမြိုင်ဇတ်ကသွားလေရာ အရပ်ဒေသတွင် ပွဲကြည့်ပရိသတ်သည့် ကြက်ပျံမကျ စည်ကားနေလေသည်။ ထိုစဉ်က မြေ၀ိုင်းခေတ်မှ ပြောင်းခါစဖြစ်သဖြင့် မငွေမြိုင်တို့ ဇာတ်အဖွဲ့သည် ရောက်လေရာအရပ်၌ ‘ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင်’ ပမာ ဖြစ်နေလေတော့သည်။